Traktera T5189-14302 cl ...
430mm miorina amin'ny varahina clu ...
Factory avo lenta h ...
Sinoa no mitana ny ampahany ...
kapila kodiarana kamiao oem ...
Auto faritra kamiao clutc ...
Clotch kamiao mavesatra ...
Kalitao avo lenta ...
Adidy mavesatra amerikana Tr ...
Kamio avo lenta clu ...
Clutch kamiao mavesatra
Disc Clutch Disc
Ho an'ny kamiao mavesatra adidy amerikana 108925-82 (15-1 / 2 "x 2") Manual fampisehoana avo lenta-Ampifanaraho kitapo ho an'ny kitapo mavesatra ho an'i Amerika,
Plate de clutch de camion
Ity haben'ny Clutch ity dia 350 * 10 * 51, Miaraka amin'ny hafanana sy ny fitsaboana ambonin'ny tany. Clutch disc Miaraka amin'ny fatiantoka ambany, tsy misy tabataba, Long Service Long. Afaka mamolavola kapila klima mifanaraka amin'ny sary sy ny santionany izahay. Azo antoka ny kalitaon'ny OEM, miaraka amin'ny vidin'ny fifaninanana.
Disc Clutch Disc ho an'i Hino
Cangzhou Hengyue auto parts Co., Ltd. dia miorina ao Hejian, Hebei, akaikin'ny renivohitry ny seranan'i Beijing sy Tianjin, tena mora ny fitaterana. orinasa, manana traikefa famokarana fivoriambe clutch nandritra ny taona maro. Famokarana kapila kapila maherin'ny 100.000 isan-taona. Ny orinasa dia manana karazana haingony matevina sy antonony manamboatra fitaovana, fitaovana fanodinana hafanana, ary koa fitaovan'ny bobongolo mandroso sy fitaovana fitiliana. Ny kalitaon'ny vokatra dia azo itokisana ary manana fanoherana, fanoherana ny hafanana avo sy fiainana lava, sns.